संसदका हाइलाइटः हाइ काढेका सांसदलाई सभामुखको व्यंग्य– थाक्नु भो बस्नुस् ! (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। आजको संसदमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले सँगै मिलेर बैठक अवरोध गरेका छन्। करिव एक घण्टासम्म संसदमा अवरोध र नाराबाजी चल्यो। त्यो बीचमा सत्ता पक्षका सांसदहरू उठेर प्रतिरोध पनि गरे।
सभामुखले प्रतिपक्षीलाई गलाउनका लागि बैठक स्थगित नगरेर बस्नका लागि बारम्बार आग्रह गरिरहे। तर प्रतिपक्षीले मानेन्। नाराबाजी लामो समय चल्यो। उभिएका प्रतिपक्षी सांसद थकित देखिन्थे। बीचबीचमा हाइ काढेका सांसदहरूलाई देखेर सभामुखले अब त थकाइ पनि लाग्यो होला बस्नुस् भन्दै व्यंग्यमिश्रित आग्रह गरेका थिए।
हेर्नुस संसद बैठकका हाइलाइटहरूः